एजेन्सी । भारतका चर्चित कमेडियन कपिल शर्माको चर्चित शो ‘द कपिल शर्मा शो’ पनि पुन: सुरु भैसकेको छ । उनका सहकर्मी सुनिल ग्रोबर ‘डाक्टर गुलाटी’ संगको मनमुटाव पछी लगभग करियर नै डामाडोल भैसकेको थियो । तर सलमान खानको प्रायोजनमा कपिल पुन: आफ्नो शो द कपिल शर्मा शो लिएर आउन सफल भएका छन । अहिले फेरी दर्शक स्रोताको मन जित्न सफल हुदैछन ।
कपिल शर्माले आफ्नै लगानीमा चलचित्र समेत बनाएका थिए । फिरिंगी नामको चलचित्र सहकर्मीसंगको विवादसंगै फ्लप पनि भयो । जिन्दगि मै ठुलो धक्का लागेका कपिल शर्माले केहि दिन अगाडी मात्र आफ्नो लामो समयको प्रेमिकासंग लगनगाठो पनि कसे । त्यस पछी उनले आफ्नो शो द कपिल शर्मा शो पनि सुरु गरेका छन ।
यति चर्चित कपिलको सम्पति कति हो ? घर कस्तो होला ? कार कस्तो होला ? कपिलका फ्यानहरुलाई चासोको विषय हुन सक्छ । भलै उनको केहि समय नराम्रो दिन चलेको थियो तर उनको लाइफस्टाइल भने उस्तै लज्करी थियो र छ । भारतीय मिडियाका अनुसार उनको सम्पती १७० करोड भन्दा बढी छ। आफ्नो शो बाहेक बिज्ञापनबाट उनले मोटो रकम कमाई सकेका छन ।
गज्जवको कुरा त के छ भने कपिल शर्मासंग बलिवुड बादशाह साहरुख खानको भन्दा महँगो भ्यानिटी भ्यान छ । उक्त भ्यानको मात्र साढे पाच करोड पर्दछ । यसको लुक्स हलिउड फिल्ममा स्पेशल इफेक्टद्वारा बनाइएको जस्तो सुपर व्हीकल जस्तो छ।
कपिलसंग मर्सिडिजको विलासी कार पनि छ । जसको मूल्य करिब साढे १ करोड २० लाख भारतीय रुपैया पर्दछ। त्यति मात्र हैन कपिलसंग रेन्ज रोभर कार पनि छ जसको मूल्य करिब एक करोड भारतीय रुपैया पर्दछ ।
कार र भ्यान नै करोडौको हुने कपिल शर्माको घर झन् गतिलो हुने नै भयो । उनको भब्य भवन भने आफ्नै गाउ पंजावमा रहेको छ । उक्त मेन्सनको मूल्य करिब २५ करो भारतीय रुपैया रहेको भारतीय मिडियाहरुको भनाई छ ।
कपिलको आफ्नो कर्मथलो मुंबईमा पनि घर छ । मुम्बईस्थित डीएलएच एन्क्लेवमा निकै महंगो फ्लाट खरिद गरेका छन। उक्त फ्लाटको मूल्य करिब १५ करोड भएको भारतीय मिडियाले लेखेको छ।